IBM yakagadzira COBOL compiler yeLinux yakavakirwa pane x86 yekuvakisa | Linux Vakapindwa muropa
IBM yakazarurwa Mazuva mashoma apfuura kuwanikwa kweye itsva COBOL compiler yeLinux x86 masisitimu. Inodaidzwa kuti "IBM COBOL yeLinux x86", kuuya kweiyi compiler kunoratidza kwenguva yegumi nemana kuti mutauro uyu uri kure nekufa.
The company inotenda kuti masangano achine masisitimu enhaka ane kodhi yeCOBOL vangangoda kuisa mafomu avo kune gore rakasanganiswa, uye kunyangwe COBOL ichiramba ichikwenya manhamba anofungidzira kupera kwayo, mazhinji masisitimu enhaka achiripo nanhasi mumasangano mazhinji pasi rese, kusanganisira mabhangi nemasangano ehurumende.
Kugadzikana kwayo uye kugona kwayo uye nemitengo yakakwira (uye njodzi) yekugadzirisa zvakare, nemimwe mitauro yemazuva ano, maitiro akasunganidzwa nekufamba kwenguva. Vanokudziridza vanofanirwa kuita nepavanogona napo kugadzirisa kunyange shanduko diki, sezvazviri mune dzimwe nyika dzeUS nehurongwa hwavo hwemakomputa ekushaya basa.
Semuenzaniso, Iowa, New Jersey, Kansas, uye Oklahoma vachiri nemaitiro avo ekushaya basa akanyorwa mumutauro weECBOL. Kunze kwemutengo wakakwira wekugadzirisa zvakare, vagadziri vanowanzo sarudza kuzvipira kune mimwe mitauro yemazuva ano, izvo zvinotsanangura chokwadi chekuti mapurogiramu anokwanisa kushanda nemavara akura ari kuwedzera kushomeka.
Izvi zvikonzero zvinotsanangura kuti nei IBM, iyo yave kushanda nesimba kumatekinoroji emazuva ano segore rakasanganiswa uye inopa iyi nyowani COBOL compiler.
"COBOL yeLinux pane x86 1.1 ndiyo yekuwedzera kuwedzera kune IBM's COBOL mhuri yevagadziri, iyo inosanganisira Enterprise COBOL ye z / OS uye COBOL yeAIX," IBM yakanyora mublog blog neChipiri ichitsanangura iyo nyowani nyowani. Zvinoenderana nekambani, COBOL yeLinux pane x86 inzvimbo ine simba uye inobudirira yekusimudzira yekuvaka nekuvandudza mashandiro eCOBOL. Inosanganisira COBOL optimization compiler uye COBOL yekumhanya raibhurari. COBOL yeLinux pane x86 yakavakirwa pane imwecheteyo yepamusoro yekuvandudza tekinoroji se Enterprise COBOL ye z / OS.
Izvo zvinotaurwa kuti inopa zvese kugona kuita sechirongwa chekushandisa kugadzira mamishinari-anokatyamadza COBOL kunyorera kweLinux masisitimu pa x86.
Zvakare, imwe pfungwa iri kumashure kwekuburitswa komutengesi ndeyekupa masimba kumasangano ayo achine COBOL-akanyorwa manyorerwo ekuaisa kune iro rakasanganiswa gore. "COBOL yeLinux pane x86 yakagadzirirwa kubatsira vatengi parwendo rwavo kuenda kune gore nekumisikidza kuisa mamishinari-akakosha manyorerwo akanyorwa muCOBOL munzvimbo yakasanganiswa yegore," IBM yakatsanangura.
Izvi zvinogona kureva mubatanidzwa we z / OS, AIX, mainframes, uye Power Systems. Muchokwadi, ma COBOL mashopu akavimbiswa kuti mashoma maitiro ekugadzirisa uye nguva dzekutungamira dzinodiwa kuti zvine hungwaru kuendesa ma COBOL / CICS maficha akagadzirirwa z / OS paLinux munzvimbo dzeX86 uye nemumagore.
Chipo chitsva ichi chinoita izvi nekubatanidza neDB2 uye IBM Ruzivo Rwevatengi Ruzivo Kudzora kuitira kuti zvishandiso zveLinux zvinoshandisa x86 zvigone kudyidzana neyekare COBOL kunyorera.
Mukuwedzera zvinotaurwa kuti yemuno XML rutsigiro yaive zvakare yakabatanidzwa kusimudzira kusangana uye yagadzira chinoshandurwa chinoshandiswa chinogona kufambisa COBOL sosi kodhi yakagadzirwa neisiri-IBM COBOL makomputa.
Asi chiziviso ichi chinoratidza zvakare kuti IBM haitendi zvizere kuti pane ramangwana reichi chishandiso, sekupedzisa.
"Mhinduro iyi inopawo makambani kugona kuendesa mitoro yebasa kuIBM Z kana pfungwa dzebhizimusi nekuita kwedata uye zviitwa zvekuita zvasangana neCICS Transaction Server ye z / OS."
Chekupedzisira, zvinotaurwa kuti chero x86-64 server nechero ipi inotevera yekugovera: Red Hat Enterprise Linux 7.8 (kana yepamusoro) kana Ubuntu Server 16.04 LTS, 18.04 LTS kana yakakwira, inogona kugona kumhanyisa IBM nyowani nyowani.
IBM inofungidzira kuti COBOL compiler yeLinux ichave ichiwanikwa svondo rinouya "Kubvumbi 16, 2021." Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyo noti, iwe unogona kutarisa izvo zvinyorwa Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » IBM yakagadzira COBOL compiler yeLinux yakavakirwa pane x86 dhizaini
WINE 6.6 inosvika neMono 6.1.1 uye inopfuura 320 shanduko